Black နဲ့ White ကအစင်းယေဘုယျအားအဝတ် | Buddhatrends
အားလုံးအမိန့်အပေါ်အခမဲ့ Worldwide မှ Delivery ပျော်မွေ့မျှနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည့်!
Plus အား Size ကိုဆင်မြန်း
Plus အား Size ကိုခြုံငုံ
အင်္ကျီ & ရှပ်နီ
ဆွယ်တာအင်္ကျီ & Pullovers
Cardigans & ကီမိုနို
တိုက်ခန်း & Loafers
Scarves နှင့် Shawls
Plus အား Size ကို
အားလုံး Plus အား Size ကိုအဝတ်အထည်
Plus အား Size ကိုထိပ်
Plus အား Size ကိုဘောင်းဘီ
အခမဲ့ Worldwide မှ Delivery
ပြန် & ချိန်း
ပန်း & Print စားဆင်ယင်
Boho chic စားဆင်ယင်
Beige သ Dress
Black & White စားဆင်ယင်
အပြာရောင် & White ကစားဆင်ယင်
သင့်ရဲ့ကျိကျိတက်မီနူးမှဖော်ပြချက်, ပုံများ, menus တွေနှင့်လင့်များ Add
အဘယ်သူမျှမ setting များကိုအတူတစ်ကော်လံတစ်ခုနဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
သင့်ရဲ့ collection များကို, အရောင်းနှင့်ပင်ပြင်ပလင့်များမှ Link ကို
Black နဲ့ White ကအစင်း Palazzo ယေဘုယျအား
$40.50 $54.00 သငျသညျ (25% Save$13.50)
Black&White / Small Black&White / Medium Black&White / Large Black & White / XL Black & White / 2XL Black & White / 3XL Black & White / 4XL Black & White / 5XL
ဤသည်ယေဘုယျအား Palazzo ဘောင်းဘီ၏စတိုင်နဲ့ခြုံငုံစားဆင်ယင်၏တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းပေါင်းစပ်။ ဒါဟာနီးပါးအနေနဲ့ခြုံငုံ၏လွယ်ကူသောကြိုက်နှစ်သက်ဆဲ Palazzo ကမ်းလှမ်းသောခြေထောက်အာကာသနှင့်လွတ်လပ်ချင်သူအမျိုးသမီးများအတွက်ထုံးစံလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်သေးငယ်သော spaghetti ပခုံးကြိုးနှင့်အနိမ့ V ကို neckline ကရက်စွဲများအပေါ်ဝတ်ဆင်ရန်, sexy ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်။
အားလုံးအမိန့်အပေါ်အခမဲ့ Worldwide မှ Delivery ။ အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ 30 ရက်ပေါင်းပြန်သွားသို့မဟုတ်အစားထိုးအာမခံနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လွယ်ကူချောမွေ့။ ဒါဟာအပူအပင်ကင်းပြီးသဘောထားကိုနှင့်အတူပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်နှင့် Buddhatrends မှာအံ့သြဖွယ်စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံရှိသည်ရန်သင့်အားနိုင်ပါတယ်။
: D *** တစ်ဦး
tamaño gasta Grande
ကိုယ်ကြိုက်တယ်!!! ကဝတ်ဆင်ရန်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများ။ စျေးနှုန်းရိုက်နှက်လို့မရပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့ကိုအမေရိကန်အရွယ်အစား 12 ဘို့, ငါ 2XL အမိန့်ထုတ်
ကြှနျတေျာ့ကိုအမေရိကန်အရွယ်အစား 12 တစ် 2XL ဖြစ်ပါတယ် ... ကို "အိတ်နှင့်တူသောကြည့်" နဲ့တူသငျသညျထို့နောက် 3XL အမိန့်ပါ။ စျေးနှုန်းအဘို့ကြီးသောပေါ့ပေါ့ကြည့်
вес 90, рост 167, комбинезонвелик, размерана2можноменьше, придетсяушивать, нотканьсупер, длялета-отлично !!!! пошиввеликолепно, смотритсяприкольно.жальразмернеугадала
J ကို *** ဈ
တစ်ဦးက *** မင်း
တစ်ဦးက *** တစ်ဦး
Хорошийтовар, отличноекачествоткани။ L-размероказалсявеликоват, благодаряфасонуичутьукоротивбретельки, вполнеможноносить, Мбылбывсамыйраз။ Когдазакзывала, бояласьчтобудетмаломерка ... такчтомоявина။ Оооченьдолгойбыладоставка, дажеоткрывалиспор, нопродавецубедилотменитьспор, мыповерилиинезря, товарвсе-такипришелимыдовольны။
အို *** တစ်ဦး
အီး *** s ကို
, G *** s ကို
M က *** ဃ
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် !! ဒီတော့ချစ်စရာ, ကြီးသောအရည်အသွေး, စူပါအစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း !! ကျိန်းသေနောက်တဖန်အမိန့်ပေးနိုင်မလား !!
M က *** မင်း
B က *** တစ်ဦး
ဒါကစိတ်ကူး romper jumpsuit ဖြစ်ပါတယ် !!! ဒါဟာတကယ်ကောင်းကောင်း လုပ်. ဒီတော့ချစ်စရာပဲ!
ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာမှတက်မှတ်ပုံတင်ရန်! သင့်ရဲ့ e-mail လိပ်စာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရိုက်ထည့်ပါ။
ပြန် & ပြန်အမ်းငွေများ
© 2018 Buddhatrends။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး